VAROTRA Eurocopter X3 v1 X-Plane 10
Helikoptera X3 (rotoro iray lehibe manana lamosina dimy, propelatra roa miaraka amin'ny lelatra dimy) Modelling Version 1.0 an'ny X3 Eurocopter for X-Plane 10.
Hita frantsay tahirin-kevitra.
Ny tena tanjona amin'ity tetikasa ity dia ny hahatonga ny mankafy ny fisidinana angidimby iray amin'ny teknolojia vaovao io. Ny fiaramanidina modely noforonina mampiasa ny masontsivana naroson'ny Fiaramanidina Mpanao (tsy misy Plugins).
Side Helisin'ny mamela mahazo asa niara maro soso sy ny anti-Torque, toy ny ao amin'ny tena zava-misy.
Araka ny fitsapana sasany atao amin'ny Rikoooo, ny virtoaly cockpit tsy hita raha plugin "Gforce" no alefa. Miezaha mba hahitana raha manana olana toy izany koa.
Misy fanazavana avy amin'ny angona: maotera NH90 Ny cabins ny Dauphin / EC 155, X3 mindran-toetra.
Raha toa ianao ka liana, dia payware Bible (v2) Hita ao amin'ny x-planefivarotana .org. Rikoooo tsy mandray asa amin'ny varotra.
Ny Eurocopter X3 (tononina "X-goba") dia fanandramana CMG vokarina avy Eurocopter.
X3 fihetsiketsehana roa turbines izay mitondra fiara amin'ny alalan'ny fitaovana iray boaty miaraka amin'ny vary Fanodina marindrano 5 sy ny roa visy Helisin'ny napetraka tamin'ny stumps ny elany.
Ity no fivorian'ny sela Dauphin ary ny Eurocopter EC 175 mitondra lehibe indrindra miaraka amina famoahana roa fanampiny ho an'ireo mpandefa sambo. Ny propulsion dia omen'ny motera roa NH90 Rolls-Royce / Turbomeca ny RTM322 ary ampifandraisin'ny vatan'ny propeller. (Wikipedia)
Downloads 5 625